Ogaden News Agency (ONA) – Odeyaasha iyo Hawlwadeenka JOKA oo shiryeeshay
Odeyaasha iyo Hawlwadeenka JOKA oo shiryeeshay
Posted by Dayr	/ July 28, 2013
Port EliZapeth Soth Africa
Qaar ka mida Odayaasha iyo Cuqaasha Ogadeniya ee Koonfur Africa iyo Hawl wadenada Jaaliyadda Ogadeniya ee Koonfur Africa oo Shirk yeeshay
Qaar ka mida Odayaasha iyo Cuqaasha Somaalida Ogadeniya ee ku nool magaalada Port Elizabeth ee xarunta gobolka Eastern Cape iyo gudiga Fulinta Jaaliyadda Ogadeniya ee Koonfur Africaa ayaa Shir wada- tashi ah ku yeeshay Xafiiska Jaaliyada Ogadeniya ee gobolka Eastern Cape gaar ahaan xaafada Uitenhage.
Shirkan oo ay soo agaasimeen hawl-wadeenada Jaaliyadda Ogadeniya ayaa lagu furay wacdi diini ah kadib waxaa warbixin ku saabsanayd wadatashi iyo is baraaru jinta bulshada Somalida Ogadeniya ee ku nool wadanka Koonfur Africa iyo xaalada guud ee Ogadeniya ka soo jeediyay gudoomiyaha Jaaliyadda Ogadeniya ee South Africa N/tiihure Cabdiraxman Siciid.
Waxaa Shirka khadka Telefoonka kagala qayb qaatay Hogaanka Arimaha bulshada iyo Abaabulka Jabhadda Wadaniya Xoreynta Ogadeniya (JWXO ) mudane Maxamed Cabdi Yaasiin (Diirane ) wuxuu Odayaashii iyo waxgaradkii shirka ka sooqayb galay siiyay warbixino meelo badan taabanaayay iyo Xaalada dhabta ah ee Ogadeniya eega kajirta. Mudane Cabdi Yaasiin ayaa Sheegay in gumaysiga Itoobiya Siyaasad, dhaqaale, iyo Ciidan ahaanba eega wiiqantay.
Dhanka kale waxaa shirka kahadlay Odayaal iyo Cuqaal kamida Odayaashi shirka ka soo qayb galay waxayna sheegeen in ay hiil iyo hooba la garab is taagayaan Halganka Hubaysan ee ay Jabhadda ONLF hogaaminayso isla markaana ka xunyihiin xadgudub-yada Kadhan ka ah xuquuqul insaanka ee kadhacaya dhamaan dhulka Somalida Ogadeniya waxayna intaas raaciyeen inay Saxaafada Caalamka iyo Tan Somaaliyeed-ba u soo ban dhigayaan xad gudunyada ay Ciidamada gumaysiga Itoobiya ka gaystaan dhulka Ogadeniya.
Shirkan ayaa ahaa Shir wadatashi iyo aqoon is waydaarsi isugu jiray isla markaana lagu baraaru jinayay Odayaasha iyo wax garadka Ogadeniya eek u dhaqan Koonfur Africa si ay door kooda kaga aadan qadiyadooda uga Ciyaaraan waxayna dhamaan masuuliyiintii ka hadashay iyo Odayaashu isla garteen in ay isku xidhnaadaan islamarkaana u hiiliyaan shacabka Somalida Ogadeniya ee Saxaafada laga xayiray